Ngaba ujonge ukujonga ubunzulu be-anesthesia? Izinzwa ze-EEG ezingasetyenziswayo nazo kufuneka zibe luncedo ngakumbi ~ umzi mveliso kunye nabenzi | Unxibelelwano lweMed
Izixhobo zokubeka iliso kwi-CO2
Ukubeka iliso kwi-CO2
Ngaba ujonge ukujonga ubunzulu be-anesthesia? Ukuchithwa kwee-sensors ze-EEG ezingabonakaliyo nazo kufuneka zibe luncedo ngakumbi ~
Isitshixo se-anesthesia kunye ne-ICU kukujonga ubunzulu be-anesthesia. Singakufezekisa njani ukujonga ubunzulu be-anesthesia? Ukongeza kwimfuno ye-anesthesiologist enamava, i-anesthesiologist depth monitor kunye ne-sensor ye-EEG engasetyenziswanga esetyenziswe kwi-anesthesia monitor nayo kufuneka ibe namandla ngakumbi.
Izinto ezilahlwayo ezingasebenziyo ze-EEG
Siyazi ukuba ubunzulu be-anesthesia linqanaba apho umzimba uthintelweyo ngokudityaniswa kwe-anesthesia kunye nokukhuthaza emzimbeni. Njengobunzulu beanesthesia kunye nokukhuthaza okwandayo kunye nokuhla, ubunzulu beanesthesia buyatshintsha ngokuhambelana.
Ukujonga ubunzulu be-Anesthesia bekuhlala kuyinkxalabo ye-anesthesiologists. Ubunzulu obunzulu okanye obunzulu buzakubangela ukwenzakala emzimbeni nasengqondweni kwizigulana. Ukugcina ubunzulu obufanelekileyo be-anesthesia kubalulekile ukuqinisekisa ukhuseleko lomguli kunye nokubonelela ngeemeko ezifanelekileyo zokuhlinzwa.
Kuxelwe ukuba i-BIS inonxibelelwano olulungileyo kunye nokuxinana kwezona ziyobisi zininzi, ngoko ke ukukhokelwa kwethamo leziyobisi ze-intraoperative, ukusetyenziswa koqwalaselo lwe-BIS, ngokweziphumo zokubeka esweni ukukhokela ukusetyenziswa kweziyobisi ze-anesthetic, ezinokuthi zilondolozwe ngcono ubunzulu be-anesthesia kwaye udlale isiphumo esihle sokubulala iintlungu.
Ngophuhliso lwetekhnoloji yokujonga i-EEG kule minyaka idlulileyo, i-BIS (bispectralindex) sele iyindlela eyaziwayo yokujonga imeko yecortex yecerebral kunye notshintsho, kwaye inokusetyenziswa njengeyona ndlela ithembekileyo yokujonga ubunzulu be-anesthesia kwinkqubo yezonyango.
I-BIS lixabiso leenkcukacha-manani elivela kwirekhodi ye-EEG ephindwe kabini yokukhutshwa kweziyobisi ezahlukeneyo ze-anesthetic kwisampulu enkulu. Le datha yafunyanwa ikakhulu kwisampulu enkulu yezifundo ezifumana iziyobisi ezibini ze-anesthesia ezifakwe kwiirekhodi ze-EEG ezimbini, kunye nemeko yokuqonda, inqanaba lokuhlala, kunye nayo yonke i-EEG erekhodiweyo. Emva koko, ngokusekwe kwi-electroencephalogram (EEG) frequency spectrum kunye namandla ombane, inani lolwazi oluxubileyo luyahambelana nokufumana uhlalutyo olungagqibelelanga lwesigaba kunye ne-harmonics.
I-BIS kuphela kwe-anesthesia sedation esweni isalathiso esivunyiweyo yi-US FDA, enokujonga imeko yokusebenza kwengqondo ye-cerebral kunye notshintsho olungcono, inovakalelo oluthile lokuqikelela ukuhamba komzimba, ukwazisa nge-intraoperative, kunye nelahleko kunye nokubuyela kwimeko yesiqhelo, kwaye inokunciphisa amayeza okubulala iintlungu indlela echanekileyo yokugweba inqanaba lokuhlala kunye nokujonga ubunzulu be-anesthesia yi-EEG.
Isalathiso sokujonga i-BIS
Ixabiso le-BIS i-100, imeko yokuvuka; Ixabiso le-BIS 0, akukho msebenzi we-EEG (inhibition yecerebral cortex), (inhibition yecerebral cortex). Ixabiso le-BIS lijongwa njengeqhelekileyo phakathi kwe-85 kunye ne-100. 65 ~ 85 iyadambisa; I-40 ~ 65 yi-anesthesia. <40 Ngamana angabonisa uxinzelelo.
Ukubeka iliso kubunzulu obuchanekileyo nobuchanekileyo be-anesthesia ngamaxesha anzima, inzwa ye-eeg engafunekiyo esetyenziswayo yokujonga ubunzulu be-anesthesia nayo iluncedo, ukuze inani lezalathi nakweliphi ilizwe liboniswe ngokuchanekileyo.
I-Shenzhen Med-link Electronics Tech Co, Ltd (emva koku ebizwa ngokuba yi-Med-linket) ineminyaka eli-15 yamava ophando kwiindibano zonyango zekhebula. Emva kweminyaka yoqinisekiso lweklinikhi, ngokuzimeleyo siphuhlise inzwa ye-EEG engafunekiyo, ehambelana ne-anesthesia enzulu ye-anesthesia esweni iimodyuli ze-BIS ezinjengeMindray kunye nePhilips. Umlinganiso ubuthathaka, ixabiso lichanekile, kwaye amandla okulwa uphazamiseko womelele. Inceda ugqirha wobulali ukuba abeke esweni isigulana esingazi nto kwaye anike amanyathelo olawulo kunye nonyango ngokuhambelana nexesha lokujonga.
Khetha isivamvo esine-non-invasive ye-EEG, ichonge iMed-linket esemgangathweni wobungcali, iminyaka eli-15 yokulima okunzulu, ukuya ezantsi emhlabeni, kunye nezinto zecandelo lezonyango ezonga iindleko, nceda iimveliso zasekhaya zingene.
* Isibhengezo: Zonke iimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo, amagama, iimodeli, njl. Njl. Eziboniswe kulo mxholo ungasentla zezomnini wazo okanye umenzi wokuqala. Eli nqaku lisetyenziselwa ukubonisa ukungqinelana kweemveliso zeMed-Linket. Ayikho enye injongo! Zonke ezi zinto zingasentla. Ingcaciso yeyokubhekisa kuphela, kwaye akufuneki isetyenziswe njengesikhokelo emsebenzini wamaziko ezonyango okanye iiyunithi ezinxulumene noko. Ngaphandle koko, nayiphi na imiphumo ebangelwe yile nkampani ayinanto yakwenza nale nkampani.
Previous: I-Philips MX40 ihambelana ne-ECG Telemetry Leadwires ET035C5I
Okulandelayo: I-D-YS Isistim ye-SPO2 ehambelanayo enokuphinda isebenze
Ixesha Post: Dec-06-2019